Nadiifinta Xaafada Dutchtown • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Nadiifinta Xaafada Dutchtown
Ma dooneysaa inaad gacan ka geysato sidii Dutchtown u qurux badnaan lahayd? Badanaa waan helnay fursadaha mutadawacnimada ku saabsan Kalandarka Dutchtown! Haddii nadaafadda luuqda, beeraha bulshada, iyo wixii la mid ah ay yihiin noocaaga, calaamadee boggan si aad ula socoto nadaafadda xaafadaha soo socda ee Dutchtown.
Nadiifinta Xaafadda iyo Xafladda Fútbol
“KIC” oo ka baxay xilli cusub oo kubbadda cagta iyo ka -qaybgalka bulshada ee Beerta Marquette! Ku soo biir deriskaaga baarkinka iyo dhammaan xaafadda Dutchtown nadiifinta subaxdii. Ka dibna la soco ciyaaraha kubbadda cagta ee saaxiibtinimo ee garoonka dhexdiisa iyo maxkamad futsal ah galabtii.
Nagala soo qaybgal beerta 9-ka subaxnimo si aad u qaadato qalabka, cuntada iyo cabitaanka, iyo funaanadaha (inta sahaydu socoto). Waxaan u bixi doonnaa baarkinka iyo xaafadda oo dhan si aan wax uga qabanno qashinka, haramaha, iyo muuqaallo kale oo aan fiicnayn oo ku xeeran Marquette.
Waxa kale oo aad ka caawin kartaa gurigaaga - nadiifiso deyrarkaaga hore iyo gadaal, qashinka ka soo qaad luuqdaada, jar cawska iyo duurka, ama raadso siyaabo kale oo aad gurigaaga iyo xayndaabkaaga u kicin karto.
Ku dhegganow si aad u dhiirrigeliso ciyaartoyga kubbadda cagta laga bilaabo duhurkii. Ciyaartoyda ka socota Dutchtown iyo guud ahaan gobolka ayaa ku soo bandhigi doona xirfadahooda garoonka weyn ee ku teedsan Louisiana iyo maxkamadda futsal -ka cusub ee Virginia iyo Gasconade.
Fursadaha la Bixiyay ee Dhalinyarada
Deriska da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 24 waxay kasban karaan $ 10 saacaddii ilaa siddeed saacadood markay soo baxaan oo ay ka caawiyaan dadaallada nadiifinta. Iimayl kicstlouis@gmail.com Ama wac (314) 265-6186 si loo diiwaan geliyo. Diiwaangelin hore ayaa loo baahan yahay.
Ku Hayso Kafiiliyaal Nadiif ah
Dhacdadan waa dadaal wadajir ah Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown iyo SLACO. Wada -hawlgalayaasha beesha ee dheeraadka ah waxaa ka mid ah Rabshadaha Daaweynta Dutchtown, Shirkadda Koonfurta ee Dutchtown, Guryaha Garcia, Gurung Bazaar, La Liga Laatiin Ameerika, Lou Fusz Ford, Kooxda Horumarinta Lutheran, Hindisaha Guryeynta ee St. Joseph, St. Louligans, Umoja St. Louis Soccer, Iyo Vitendo 4 Afrika.
Wax -qabadkan waxaa lagu maalgeliyaa qayb ahaan iyada oo loo qoondeeyo lacagaha Deeqaha Horumarinta Bulshada ee laga helo Waaxda Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka iyo Maamulka Horumarinta Bulshada ee Magaalada St. Louis.
Brightside St. Louis ayaa kaa caawin kara inaad hesho boorsooyinka qashinka, galoofyada, iyo qalabka nadaafaddaada. Foom ku buuxi khadka tooska ah or mid daabac oo dir si aad ugu keydiso qalabkaaga nadaafadda.
DutchtownSTL.org ayaa kaa caawin kara inaad ereyga ku saabsan dhacdadaada nadaafadda u soo mariso degelkeenna, Facebook, Instagram, Iyo Twitter. Waxaan sidoo kale bixin karnaa naqshadeynta xaashida waraaqaha si aad ugu wareegi karto aaggaaga tabaruceyaasha. Nala soo xiriir si aad noo ogeysiiyo nadaafadaada.